Captan Ciise Midnimo oo markale kasoo dhex muuqday horyaalka labaad ee Norwey. - NorSom News
Captan Ciise Midnimo oo markale kasoo dhex muuqday horyaalka labaad ee Norwey.
Kabtankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya iyo kooxda Elman, Ciise Abshir Aden(Midnimo) oo sanadadii ugu danbeeyay ka ciyaariyay kooxo kala duwan oo Norwey ka tirsan hortaalka heerka labaad ee wadanka ayaa hada u muuqda inuu boos joogto ka helay kooxda KFUM. Midnimo ayaa tababar la qaadanayay kooxda intii la guda jiray vinterkii, waxaana uu cajabiyay bahda tababarka iyaga oo go aansaday inay ka ciyaarsiiyaan difaac, halka uu marka uu hore ahaa weerar, marna-marna weerar xigeen(doobi noome).
Macalinka Kooxda ayaa amaan kala duldhacay Ciise shalay markii ay kooxdiise ka badiyeen Bryne. Ciise waxaa yar khaladkiisa, waana uu dheereeyaa. Waxa uu aad ugu fiicanyahay kubada madaxa ah, waxa uuna kubada si dhaqso ah u gaarsiiya laacibada kale ee garoonka kujiro, taas oo keenayso inay kooxdu weerar abuurto.
Ciise ayaa kasoo ciyaaray wadamo kala duwan oo ay kamid tahay Soomaaliya, Tanzaniya iyo Malta iyo kooxo dhowr ah oo ka tirsan horyaalada kala duwan ee wadanka Norwey.
Warkan oo norsk ah halkan ka akhri
Previous articleSoomaali sharciga lagala noqday waxyaabo ay facebook ku qoreen dartiis: waraysi
Next articleProf. Jawaari oo ka baaqdey booqashadiisii Norwey.